လူအတော်များများဟာအမေရိကန်ကျောင်းများအတွက်အလုပ်မလုပ်. သင့်ကလေးကိုကူညီပေးဖို့ရှိပါတယ်သူကိုဆရာ, ဆရာမထက်အခြားကျောင်းဝန်ထမ်းများရှိပါတယ်. သင်သည်သင်၏ကလေး၏ကျောင်းတွင်တွေ့ဆုံမည်ပြည်သူပြည်သားအချို့အကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
ကျောင်းစာအုပ်န်ထမ်းတစ်ဦးကျောင်းတွင်အလုပ်လုပ်သောလူများမှာ. ဆုံးမဩဝါဒပေးဝန်ထမ်းရှိပါတယ်, နှင့်အခြား Non-သင်ကြားမှုလုပ်သားများရှိပါတယ်, လွန်း. အားလုံးကျောင်းဝန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်များသည်သင်၏ကလေး၏ပညာရေးများအတွက်အရေးကြီးသောအလုပ်အကိုင်များပြုပါ.
ဆရာများကျောင်းသားများအတွက်ပညာပေးဘို့တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည်လူဖြစ်ကြ၏. သူတို့ကစာသင်ခန်းထဲမှာလှုပ်ရှားမှုများသင်ယူခဲ. အသက်အရွယ်နုပျိုသောကျောင်းသားများဆရာများအများအပြားအကြောင်းအရာများသင်ပေး. အဟောင်းတွေကျောင်းသားများအတွက်, တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ဆရာများရှိပါတယ်. US မှာ, မိသားစုများကိုသူတို့ကလေးတွေပညာနှင့်ကူညီပံ့ပိုးရန်ဆရာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ဆရာ, ဆရာမများအတွက်လေးစားမှုကိုပြသ. ဆရာများတစ်နှစ်လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမိမိတို့၏ကျောင်းသားများကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်. ဒါကသာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်နှင့်သင့်ကလေးနဲ့အတူပြဿနာတစ်ခုရှိကွောငျးမဆိုလိုပါ.
ESL တစ်စက္ကန့်ဘာသာစကားအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတိုကောက်. တချို့ကကျောင်းများတွင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာသင်ယူနေသောမျက်နှာသစ်ကလေးများကိုကူညီ ESL ဆရာ, ဆရာမများ. ESL ဆရာများများသောအားဖြင့်ကိုယ့်အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူများအတွက်အထူးအတန်းအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ်များ. သို့မဟုတ် ESL ဆရာများတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပုံမှန်အတန်းသို့ရောက်ရှိအင်္ဂလိပ်သင်ယူသူကူညီ. သည်အခြားဆရာများကဲ့သို့ပင်, ESL ဆရာများသင့်ကလေး၏သင်ယူမှုအကြောင်းအရာကိုသင်တို့ထံသို့စကားပြောပါလိမ့်မယ်.
အများအပြားကျောင်းများအတွက်, လက်ထောက်သူတို့ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဆရာ, ဆရာမကူညီ. တချို့ကစာသင်ခန်းမျိုးစုံလက်ထောက်ရှိသည်နှင့်အခြို့သောအဘယ်သူမျှမရှိ, စာသင်ခန်းအတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်.. လက်ထောက်မကြာခဏအထူးလိုအပ်ချက်များကိုသူကျောင်းသားတစ်ဦးကကူညီ. လက်ထောက်လည်းကျောင်းသားအုပ်စုငယ်များဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ဖြည့်စွက်ကူညီ. ဥပမာ, သူတို့အင်္ဂလိပ်သင်ယူဖို့သင့်ကလေးကိုကူညီစေခြင်းငှါ, တစ်ဦး ESL ဆရာကဲ့သို့.
ကျောင်းအုပ်ကြီးတစ်ဦးသည်ကျောင်းမှာဦးခေါင်းစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်တယ်. ကျောင်းအုပ်ကြီးကျောင်းအဆောက်အဦအားလုံးကိုဆရာကြီးကြပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်. ကျောင်းအုပ်ကြီးဆရာများ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်. ကျောင်းအုပ်ကြီးကျောင်းသားများကိုသင်ပေးပါဘူး. အစား, ကျောင်းအုပ်ကြီးဆရာကူညီပေးသည်, စည်းကမ်းနှင့်အတူကူညီပေးသည်, နှင့်ကျောင်းဦးဆောင်. ကြီးမားသောကျောင်းများအတွက်, ဒုကျောင်းအုပ်လည်းရှိပါတယ်. ဒုကျောင်းအုပ်ကျောင်းအုပ်ကြီးကကူညီ. US မှာ, မိဘတစ်ဦးဆရာနှင့်အတူဒုက္ခရှိပါတယ်လျှင်, မိဘများသောအားဖြင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးမှပြောသွား.
ကျောင်းစာအုပ်တိုင်ပင်မှူးမတ်ကျောင်းသားများ၏ပညာရေးကိုကူညီ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, လူမှုရေး, နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များ. ကျောင်းစာအုပ်တိုင်ပင်မှူးမတ်ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းအောင်မြင်ဖို့ကူညီအစီအစဉ်များကိုဦးဆောင်လမ်းပြ. တိုင်ပင်မှူးမတ်ဒုက္ခသည်မိသားစုများအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. တိုင်ပင်မှူးမတ်သင့်ရဲ့ကျောင်းသားကသူတို့အသစ်ကကျောင်းချိန်ညှိကူညီပေးနိုင်ပါသည်. တိုင်ပင်မှူးမတ်ဒုက္ခသည်ကျောင်းသားများအတွက်အထူးအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းစေခြင်းငှါ,. တိုင်ပင်မှူးမတ်တခါတရံမှာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကူညီ. တစ်ဦးကအကြံပေးသင်သည်သင်၏ကျောင်းသားအပိုအကူအညီလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ထင်လျှင်ကျောင်းတွင်စကားပြောကောင်းတစ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်.
သူနာပြုများလုံခြုံပြီးကျန်းကျန်းမာမာကျောင်းသားများကိုထားရန်ကျောင်းများအတွက်အလုပ်မလုပ်. ကျောင်းသားတစ်ဦးနေမကောင်းခံစားလျှင်, ဆရာဟာသူနာပြုသူတို့ကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်. ကျောင်းသားနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အဆိုပါသူနာပြုသူတို့ပိုကောင်းခံစားရသည်အထိအိမ်မှာသူတို့ကိုပို့ပေးပါရန်ဆုံးဖြတ်သည်. US မှာ, ကျောင်းသားများကို '' စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တာကိုကျောင်းသို့သွား၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. တခါတလေ, သူတို့က USA တွင်ဘဝမှညှိမယ့်ခက်ခဲအချိန်ရှိခြင်းကြောင့်ကျောင်းသားများကိုစာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ခက်အချိန်ရှိသည်. တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတိုင်းပြည်ကနေအမေရိကန်နိုင်ငံဖို့လာမယ့်အလွန်ခဲယဉ်းသောကြောင့်သူတို့ကအပိုအကူအညီလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သူနာပြုများအခက်အခဲညှိရှိခြင်းနေသောထောက်ခံမှုကျောင်းသားများကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
အဆိုပါကျောင်းတွင်အတွင်းရေးမှူးကျောင်းအုပ်ကြီးကူညီပေးသည်နှင့်မကြာခဏကျောင်းအဆောက်အဦး၏မျက်နှာစာရုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်. တခါတရံမှာအတွင်းရေးမှူးရှေ့တွင်ရုံးဝန်ထမ်းများဟုခေါ်ကြသည်. သင်သည်သင်၏ကလေး၏ကျောင်းကငှါလာကြသောအခါ, သင်၌စစျဆေးဖို့စက္ကူလက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. ဤသည်ကိုလုံခြုံကျောင်းသားများကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်. အတွင်းရေးမှူးသင်၌လက်မှတ်ရေးထိုးကူညီပေးပါမည်. အတွင်းရေးမှူးရှိရာသွားကြဖို့သငျသညျဖျောပွနိုငျ. သငျသညျကြောငျးအတှကျတက်လက်မှတ်ထိုးကူညီလိုလျှင်, အတွင်းရေးမှူးကူညီပေးသည်. တချို့ကကျောင်းများအစောပိုင်းကျောင်းမှအိမ်သို့သင့်ကလေးယူမယ့်စက္ကူလက်မှတ်ထိုးရန်သင့်အားလိုအပ်. အတွင်းရေးမှူးသင်သည်သင်၏ကလေးသည်ထွက်လက်မှတ်ထိုးကူညီပေးပါမည်. ဤသည်ကိုလုံခြုံသင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကသာယုံကြည်စိတ်ချရသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အတူအိမ်ပြန်သွားနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါအုပ်ကြီးအများအပြားကျောင်းအုပ်များနှင့်စာသင်ကျောင်းများကိုဦးဆောင်. ကြီးကြပ်ရေးမှူးမူဝါဒအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်, သင်ရိုးညွှန်းတမ်း (ဘာကျောင်းသားများကိုစာသင်ခန်းထဲမှာသင်ယူ), နှင့်ခရိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို. ကြီးကြပ်ရေးမှူးအများအပြားကျောင်းများအတွက်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်, သူတို့သည်သင်၏ကလေးသည်ကဲ့သို့တူညီသောကျောင်းမှာအဆောက်အဦး၌မကျရမည်အကြောင်းတည်း.